Shiinaha Dhalada Kaabsal PET warshad Cas iyo soosaarayaasha | Baakadaha Qianduo
1. Naqshadaynta duritaanka duritaanka duritaanka duritaanka toosan ma aha oo kaliya inay hubiso joogteynta iyo saxnaanta dhumucda darbiga tuubbada iyo tayada, laakiin sidoo kale waxay hubisaa dhalada caabbinta sare ee dhalada, waxqabadka xirashada sare, waxqabadka muuqaalka sare iyo xoog jireed iyo farsamo ku filan.
2. Marka lagu daro dhalada adduunka ugu iibinta badan, soo gaabiyo muddada keydka suuqa daroogada.
3, dhalada wax lagu duubo ee kaabsoosha ah oo ku takhasusay dammaanad qaas ah, qaabeynta iyo soo saarida baakadaha iyadoo la raacayo istiraatiijiyaddaada astaanta ah.
4. Qaabdhismeedka shaabadaynta khaaska ahi wuxuu hubiyaa in aan wax daad ahi soo bixin
Shuruudaha Xulista Dhalada PET
1. Daboolida daboolka dhalada, uumiga uumiga biyaha. Cidhiidhiga hawada iyo uumiga uumiga ayaa door muhiim ah ka ciyaara xasiloonida amarka;
2. Heerka tayada ee dhalada balaastigga ah. Ka samee falanqaynta tayada wax soo saarka heerarka tayada wax soo saarka soo saaraha si loo go'aamiyo inay suurad wacan tahay iyo in kale. Shirkadaha dhalada balaastigga ee dawooyinka sameeya waa inay dejiyaan heerarka ganacsi ee ka sareeya heerarka qaranka, iyo heerarka warshaduhu inay noqdaan kuwa aad u adag;
3. Xullo aaladaha ceyriinka ah ee dhalooyinka balaastigga ah iyo qaaciidada waxyaabaha lagu daro: heerka wax soo saarka ee dhalooyinka adag ee caaga ah waxaa lagu dabaqi karaa alaabta ceyriinka ah, waana inuu buuxiyaa shuruudaha aan sunta lahayn, ur lahayn, iwm, maxaa yeelay waxaa jira dad badan alaabta ceeriin ee ugu muhiimsan, taas oo u baahan in loo xusho waxqabadka guud ee alaabta ceeriin. Kiniiniyada guud ahaan waxay isticmaalaan polyetylen-cufan-badan, dhalooyinka polypropylene, sida dhalooyinka PET, oo loo isticmaali karo inay u baahdaan daahfurnaan iyo waxqabad wanaagsan oo ka hortaga dhalooyinka qalinka, Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa qaababka daroogada dareeraha ah ee polypropylene ama dhalada polyetylen sida dhadhanka ugu muhiimsan;
4. Degganaanta iyo iswaafajinta dhalooyinka caagga ah. Markaad isticmaaleyso dhalooyinka balaastigga ah, baaritaanka daroogada ee horumarsan waa in la sameeyaa si loo hubiyo xasiloonida iyo ujrada iswaafajinta dhalooyinka caagga ah iyo daroogada. Is-dhexgalka, kala-baxa, xayeysiinta, fal-galinta kiimikada iyo sheegashada dhalooyinka caagga ah ee daroogada ah ayaa lagu go'aamin karaa ogaanshaha sayniska;
5. Nidaamka hubinta tayada.
Hore: Dhalo Kaabsal PET Green
Xiga: Dhalada Kaabsal PET Transparent